Wefdi ka socda Norway iyo World Bank oo booqday Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya. | Hadalsame Media
Home Wararka Wefdi ka socda Norway iyo World Bank oo booqday Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya.
Wefdi ka socda Norway iyo World Bank oo booqday Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya.
(Muqdisho) 04 Juun 2018 – Wefdi ka socda Baanka adduunka (World Bank), ayaa kulan kula yeeshay Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Beyle Magaaladda Muqdisho maanta oo Isniin ah.
Wasiir Beyle oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa face-buuga ayuu ku sheegay in wefdigaan uu kala hadlay hormarinta dhaqaalaha dalka. Sidoo kale waxaa kulanka qeyb ka ahaa wefdi kale oo ka socday dowladda Norway.
Dowladda Soomaaliya ayaan illaa hadda ku guuleysan inay soo daabacato Lacago cusub oo shillin Soomaaliya.
Hay’adda Caalamiga ah ee lacagta IMF iyo Baanka adduunka ayaa dhawaan sheegay in Soomaaliya ay ka gudubtey tijaabooyin la xariira kobcinta daqliga gudaha islamarkaana taasi ay fursad u tahay dalka sidii looga cafin lahaa daymaha iyo sidoo kale in Soomaaliya muddo kadib soo daabacan karto lacag shillin Soomaali cusub.
Previous articleDAAWO: Waa sidee xaalku marka kubad lagu ciyaaro meel aan cufis-jiidad lahayn sida hawada sare? (Cir-bixiyeenno wacdaro dhigay)
Next articleMaxaa looga hadlayaa shirka amniga qaranka ee ka socda Magaaladda Baydhabo?